I-IBC I-IBC XHUMA YOKUXHUMA-NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat, uMsasazo osasazisi we-NAB Bonisa - NAB Bonisa LIVE
ikhaya » iindaba » ISICWANGCISO SOKUPHAKATHI KWI2019
ISICWANGCISO SOKUPHAKATHI KWI2019
Cinga Ulawulo, Cinga I-Rascular
I-Rascular yinkampani yokuyilwa kwesoftware eyenza izicelo zokulawula ngokuchanekileyo kwi-third-party, ubuchwepheshe bevidiyo bobugcisa. Sisebenza kumanqanaba okusasazwa, ukusasazwa kunye ne-A / V. I-Bespoke okanye engekho-shelf, izicelo zethu zisebenza kwiinkqubo ze-SDI ne-IP, kubandakanywa I-Newtekye - UJ® umgaqo-nkqubo, ukubonelela ngee-template-based okanye iipaneli ezichazwe ngumsebenzisi ezivumela ukufikelela kuyo nayiphi na imisebenzi efunekayo, ukunika abasebenzisi ukulawulwa okuchanekileyo abayidingayo, nangaphezulu.
I-Rascular iye yaqhubeka nokwandisa ukuhlanganiswa kwayo I-Newtekye - UJ® inkqubo, ukuvakalisa uphuhliso Lahlela kude, isicelo esitsha se-Helm, esinika ii-master control switching kwi-software. Oku kuvumela abasebenzisi ukuba bafumane lula kwaye bajonge imithombo engenayo, eboniswe kwi-viewer. Ukongeza, i-Castaway iquka ukudibanisa umboniso / ukuhanjiswa kwamandla ukuguqula ukuguquka, ukufakwa kwegama kunye nokunye njalo. I-Rascular's standalone NDI application application RouteMaster-Lite Kwakhona kuxhamla kula manqaku amasha.
Ukuhlaziywa kweelm Helm
Helm izibonelelo ezivela kumaphulo athile, kuquka ukukwazi ukulawula ngoku Blackmagic Designezininzi HyperDeck ukusasaza. NgeHel Helm, abasebenzisi ngoku banokukudonsa nokulahla amaqela olawulo lokuthutha olulodwa kwipaneli yomsebenzisi ukubonelela ngokulula ukulawula iseva. I-Helm ihlanganiswe neContour ShuttlePro I-USB ijog / i-shuttle wheel, isilawuli esilula, esisebenzisayo, esisebenza kunye nekhibhodi kunye ne mouse, ngoku iyakwazi ukusetyenziswa ukulawula ukuthutha kwe-server kwi-Helm. PESA Ulawulo lwe-router lufumaneka kwakhona nge-Helm.
Ukuhlanganiswa kwe-Helm kunye ne-YouTube kunye ne-Facebook Live
Kwimiboniso yexesha lokuqala kwi-IBC 2019, i-Rascular igxininisa ukukwazi kwayo ukunikezela ukulawula ngokuthe ngqo kwe-YouTube ngokusasaza ngokukongeza kwikhono layo lokuvumela ukusabalalisa kulula kwi-Facebook Live, usebenzisa i-flagship yokulawula iteknoloji ye-technology. Oku kuya kuphunyezwa nge-Helm kwi-PC okanye nge-intanethi ze-intanethi ezizimeleyo.
Kwakhona ku boniso
WebCentre isisicelo esizimeleyo esizizixhobo ezibonelela ngokubamba iqela lomsebenzisi kunye nokulawula, ukulungiswa kwepaneli yokulawula kunye nokufikelela kula mapaneli ekulawuleni idivaysi. Kusekwe-based-based server-based, nayo nayiphi na isiphequluli samanje kunoma iyiphi i-tablet-tablet, i-PC, i-smartphone-inako ukufikelela kwiipaneli zolawulo ezichazwe ngumsebenzisi ngokubhekiselele kwisilungiselelo solawulo lomsebenzisi. Ukusebenzisa i-HTTPS, ikhuselekile ngokupheleleyo.
RouteMaster-Lite i-standalone, i-PC-based, isicelo esisodwa selayisenisi, esekelwe kwiTeknoloji enamandla ye-RouteMaster kwaye yenzelwe ukunika ulawulo olubanzi lwe-router kwimithombo ye-UN ukuya kwi-20 × 20 ubukhulu bombane.
RouteMaster idibanisa i-Rascular's router control and emulation teknoloji yokwenza inkqubo yokulawula i-router enamandla kodwa iguquguqukayo. Eyakhelwe kwiimodyuli zeekhompyutha ezizamile, i-RouteMaster ingasetyenziswe ngeendlela ezahlukeneyo zokuhanjiswa kwevidiyo kunye neendlela ezihamba phambili, ezikhoyo kunye nekamva, i-SDI kunye ne-SDI / IP hybrid - ezivela kubakhi abakhulu be-router. Ikwabonelela ngokulawulwa kwezixhobo ze-NA. Kuyafaneleka ngokufakela ukufakwa kwezixhobo ezintsha okanye ukwandisa amandla - kunye nobomi - beenkqubo ezikhoyo. I-RouteMaster nayo ngoku iquka izixhobo zamanqaku, ukuvumela ukuhlanganiswa okulula kwe-I-routination ebonakalayo kwi-SDI.
I-Blast ye-B2B i-ejensi yokunxibelelana enika i-bespoke PR, ukuthengiswa kunye neenkonzo zokudala kwiinkampani zeteknoloji kwiimveliso zecandelo lezobugcisa, kwi-content acquisition ngokusebenzisa ukuhanjiswa ekhaya.
Izithuba zakamuva ngeJump (ndinibone nonke)
I-UK yeDerbyshire Conabulary ikhetha i-LiveU yokuBanjiswa kweVidiyo yeVidiyo kunye neQela layo leDrone - Oktobha 10, 2019
I-Globalbecast iphakamisa unyaka-inkampani ye-18 iminyaka uShakunt Malhotra kuMlawuli oLawulayo, e-Asia - Septemba 26, 2019
I-LiveU ityhila icandelo lokuqala leNdibaniselwano ye-5G ye-Cellular Bonding - Septemba 10, 2019
Iinkqubo zolawulo lwe-AV U ku sasazwa Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Inkqubo yoLawulo Digital Nirvana UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli IBC ukudityaniswa kuhlolwa kweendaba NA lawulo lwe software Umxholo ophantsi i-subtitling, i-Digital Nirvana, uhlolo lweendaba, IBC Injini yeVidiyo	2019-07-12
Previous: Ukungakhokheli: Ukuveliswa nokuPhuculo / ukuPhuma kwangaphakathi
next: Yenjini Yophando